त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ कांग्रेसका अन्तर्घाती « Pana Khabar
त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ कांग्रेसका अन्तर्घाती
समय : 10:03 am
नीय तह निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध घात गर्ने कांग्रेसी कार्यकर्ताको सूचीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ पनि परेका छन्। कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका खनियाँले चितवनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात गरेको उजुरी परेको थियो। कांग्रेसको अनुशासन समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि डा. खनियाँसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। यो खबर रमेश सापकोटाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
-गत संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेस अनुशासन समितिले नेतृ सुजाता कोइरालालाई कारबाही गरेको थियो। तीन महिना निलम्बन गरेको केही समय भुक्तान भए पनि पछि पार्टीले बाँकी समय मिनाहा गरिएको थियो।
विकासका काम कांग्रेसले मात्रै गरेका छन्,अरु पार्टीले सिन्को सम्म भाँचेका छैनन् : आरजु देउवा
ओलीले आरजुलाई भने – कैलालीको थारुले चुनाव जित्नु हुन्न ? काठमाडौंबाटै आउनु पर्छ ?
प्रचण्डले यही बेला जनयुद्धमा कोख रित्तिएका र सिन्दुर पुछिएकाप्रति क्षमायाचना गरुन् :कमल थापा
दश देखी बिस बर्ष भित्रमा हरेक नेपालीले गर्व गर्नसक्ने नेपाल बनाउँछौ : रवीन्द्र मिश्र